DOCUMENTARIES Archives - Pejy 12 amin'ny 12 - Fisandratana Afrikhepri
Ny planetantsika - Documentary (2019)
Jereo ny zava-mahatalanjon'ny tontolo iainantsika. Tena zava-bita ara-teknolojia, ny andian-dahatsary fanadihadiana dia nalaina sary tamin'ny famaritana avo be tany amin'ny firenena 50 mahery. Ala mikitroka ...
13th - Documentary (2016)
Amin'ity fanadihadiana fanadihadiana tsy marim-pototra ity, ny akademia, ny mpikatroka ary ny mpanao politika dia mamakafaka ny fanamelohana ny Afrikanina Amerikanina sy ny firoboroboan'ny fonja any Etazonia.
I am Bolt - Documentary (2016)
Noho ny fandreseny marobe sy ny rakitsorany marobe, Usain Bolt dia lasa malaza ankehitriny amin'ny fanatanjahantena. Mihoatra ny mpanao fanatanjahan-tena, izy izao dia sary masina sy loharanom-panahy ...
GIMS: Ao amin'ny firaketana - Documentary (2020)
Ity horonantsary fanadihadiana ity dia manambara ilay lehilahy manana solomaso mainty sy ireo album 5 tapitrisa namidy. Dia tena fitsangatsanganana, avy any Paris mankany Marrakech, mandalo an'i Etazonia, mankany Kinshasa, tanànany ...
Etiopia: Ilay Tany Nampanantenaina tamin'ny Rastasy Farany - Documentary (2019)
Ankehitriny dia misy Jamaikana an-jatony vitsivitsy monina ao amin'ny tanànan'ny Shashaméné. Tontolo iray misaraka, toerana masina, izay misy ny tsy Rasta, ireo maloto, mainty na fotsy, ...
Fiainana eo amin'ny planetantsika - Documentary (2020)
Ity fanadihadiana tsy manam-paharoa ity dia miatrika ireo fanamby lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fanehoana ny fahasimban'ny natiora mandritra ny androm-piainany, fa koa amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra manome fanantenana mahery vaika ...
Page 12 ny 12 Avant 1 ... 11 12